Dembi lagu helay kuwii agaasimay qarixii Kampala - BBC News Somali
Dembi lagu helay kuwii agaasimay qarixii Kampala
26 Maajo 2016
Xaakimka maxkamad ku taalla dalka Uganda ayaa koox islaamiyiin ah ku helay dembi la xiriira labo qarax oo sanadkii 2010-ka lagu qaaday labo goobood oo lagu daawanayay ciyaartii ugu dambeysay ee tartanka kubadda cagta ee sanadkii 2010, kaasi oo ay ku dhinteen in kabadan 70 qof.
Qaaliga ayaa shan qof ku helay dambigaasi, saddex kalena dambi ayaa lagu waayay, waxaana hadda wali socota go’aan ka gaarista shan qof oo kale.
Alfonse Owiny-Dollo, oo soo xiganaya dadka markhaatiyada ah ee horeyba looga maxkamadeeyay ku lug lahaanshaha arrintani ayaa waxa uu Ciisa Axmed Luyima ku helay dembi ah in uu soo maleegay qaraxyadaasi ay gaysatay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya.
Dadka eedeysaneyaasha ah oo lix ka mid ah ay u dhasheen Kenya, shan reer Uganda ah iyo labo Tanzanian ah ayaa waxa ay sheegeen in jirdil lagu sameeyay si ay u qirtaan dambiyadaasi basle sheegashadaasi ayaa waxaa ku gan seyray maxkamadda.
Image caption Qarixii Kamapla ka dhacay 2010 waxaa ku dhintay 70 qof ka badan
Billowga dhagaysiga xukunkan ayaa saacado dib loo dhigay maanta kadib markii ay korontada maxkmadda go'day.